Waa Sidee Nolosha Muhaajiriinta Soomaaliyeed oo Ku Jira Xabsiyadda Dalka Liibiya – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Waa Sidee Nolosha Muhaajiriinta Soomaaliyeed oo Ku Jira Xabsiyadda Dalka Liibiya
Kumanaan qaxooti iyo muhaajiriin ah ayaa haatan lagu hayaa xabsiyo ay maamusho Waaxda Socdaalka ee waddanka Liibiya.
Dad badan oo kamid ah muhaajiriintaas ayaa dib loogu soo celiyey Liibiya iyagoo saaran doonyahooda kadib markii ay u socdaaleen.
Dadkaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ah ayaa intooda badan waxa ay kasoo carareen wadamadda Somalia, Eritrea, iyo Sudan waana waddamo ay ka jiraan dagaallo iyo xukuno kali talisnimo ah kuwaasoo keeni karo inuu dhaco xad gudub dhanka xaquuqda aadanaha ah.
Qaxootigan ayaa waxa ay sheegeen inaysan ku laaban Karin waddamadooda isla markaana ay u baahan yihiin in loo daad gureeyo waddan nabad ah.
Xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ah ee ku yaallo magaalada Tripoli gaar ahaan Triq al Sikka waxaa ku jira in ka badan 400 oo qof waxaana lagu sheegaa xeradaas mid kamid ah kuwa ugu xun ee ay ku jiraan dad qaxooti ah iyadoo lagu sababeynayo heerka dayacaadda iyo xad-gudubka ka jira xeradaas.
Muhaajiriinta ayaa waxa ay sheegeen in maalin walbo ay ku qaataan mugdi islamarkana aysan usoo dhawaanin kuwa ilaliya xerada iyagoo ka cabsanaya inay ka qaadaan cuduro waxa uuna mid kamid ah dadkaas ka dhawaajiyey in habeen iyo maalin ay isku mid u tahay iyaga.
Muddo haatan laga joogo seddex isbuuc kahor Abdulaziz oo ah 28 jir Somali ah ayaa isku dhex gubay xero lagu hayo dadka soo galootiga ah oo lagu magacaabo Triq al Sikka waxa ayna xeradas ku taallaa waddanka Libya gaar ahaan maglada casimadda ah ee Trippoli.
Waxa ayna dadkii la xerna sheegeen inuu is dilay kadib markii saraakiil ka socota hey’adda qaxootiga UNHCR oo soo booqday xerada ay u sheegeen ineysan jirin fursad looga qaadayo waddanka Libya.
Abdulaziz ayaa ku jiray xeradaas 9 bilood waxa ayna qaar kamid ah saaxibadiisa kula xirnaa halkaasi sheegeen inuu dareemayey farxad la’aan.
Maalmo badan ayaan qaxootiga kasoo aruurinay lacago ay usoo direen qoysaskooda si ay ugu iibsadaan buskud, qaxwo iyo shumac waxaana isku dayeynay inan farxad gelino saaxibkeen balse ugu dambeen wuu is dilay ayuu yiri qof kamid ah qaxootiga.
UNHCR ayaa sheegtay in Somaliga is dilay uusan xiriir la laheen booqashadooda waxa ayna sheegtay hey’addu in Abdulaziz loo soo qaadi rabay waddanka Niger bisha soo socoto, waxa ayna intaas ku dareen in aysan sababta uu isku dilay ninkaas.